Misaona ny zavakanto, lavo ny andrarezina: nodimandry i Fafa ao amin’ny tarika Mahaleo | NewsMada
Misaona ny tontolon’ny zavakanto malagasy sy ny Malagasy rehetra. Nodimandry, omaly, i Fafa, mpikambana ao amin’ny tarika Mahaleo. Hisy ny fanomezam-boninahitra sy fanaovam-beloma farany azy, ho an’ny daholobe, ao amin’ny lapan’ny Kolontsaina etsy Mahamasina.
Nodimandry, omaly antoandro, tao amin’ny HJRA, teo amin’ny faha-65 taony, Rajaonarison Famantanantsoa, fantatra amin’ny hoe Fafa, rehefa nolazoin’ny aretina nandritra ny fotoana maro. Mpikambana sady anisan’ny nanorina ny tarika Mahaleo, tamin’ny fiandohan’ny taona 1970 ny tenany. Nanomboka tamin’ny tapaky ny taona 2018 izy no efa tsy salama, sempotsempotra, narary vavony ihany koa, ary voatery tsy niaka-tsehatra intsony. Nihanihombo izany ary voatery naiditra hopitaly. « Tsy nahazaka ny fahasemporana intsony ny fony ka izao nitarika ny fahafatesany izao », hoy i Bekoto.
Andrarezin’ny mozika malagasy, fanta-daza amin’ny feony miavaka tsy manam-paharoa, mampitsiky ny olona, indrindra ireo mpanatrika ny fampisehoana nataony, tamin’ny fahatsorany sy ny vazivaziny… Izay i Fafa. Marobe, ireo naneho ny alahelony, raha vao nandre ity vaovao ity, any amin’ny tambajotran-tserasera any. Tao aza ireo tsy nety nino, niandry sao vaovao tsy marina indray ity niparitaka ity. Teo koa ireo tonga nanotrona ny famoahana ny razana teny amin’ny hôpitaly. Hita ho samy feno dia feno ny fon’ny rehetra.
Fafah, olona tsotra…
Teraka tamin’ny 13 mey 1954, teto Antananarivo, Rajaonarison Famantanantsoa. Toy ireo mpikambana enina mirahalahy ao amin’ny tarika, nianatra tany amin’ny Lycée ao Antsirabe i Fafa. Nandritra ny fitokonambe, tamin’ny taona 1972, no nifankahitan’izy ireo, raha samy mpankafy mozika ka niara-nanentana ireny fotoana ireny, tamin’izany. Mpiasam-panjakana izy, manam-bady ary manan-janaka telo.
Olona tsotra, tsy tia nieboebo, nitsiky sy nampitsiky lava ireo nifanena taminy i Fafa. “Ny feo ihany no hany ananako”, hoy izy, araka ny voasoratry ny mpanao gazety vahiny iray, nanatontosa angon-tahiry momba ny tarika Mahaleo. Tsy mpihira fotsiny anefa i Fafa fa mahay mitendry gitara koa izy. Nampisongadina azy ny feo mangany somary ambony. Rehefa misy andian-tanora mivazovazo sy mitendry gitara, tsy maintsy eo hatrany ny hiran’ny Mahaleo ary misy ireo miezaka ny maka ny feon’i Fafa, saingy tsy mbola nisy nahatafavoaka hatreto.
Homem-boninahitra sy hatao veloma farany, etsy Mahamasina
Amin’ny maha andrarezina an’i Fafa, tsy vitsy ny mangataka ny hanome voninahitra sy hanao veloma farany azy. Araka ny voalazan’ny fianakaviany, raha tsy misy ny fiovana, amin’ny alarobia izao no hanatontosana izany, ao amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. Amin’io alarobia io koa no handevenana azy, eny amin’ny fasan-drazany, eny Rangaina Ilafy, aorian’ny fotoam-pivavahana eny amin’ny FJKM Tranovato Faravohitra.
Landy R. sy Fanou